आँपको उत्पादन बढाउन रामपुर क्याम्पसमा अनुसन्धान शुरु | Ekhabar Nepal
भरतपुर,फागुन ८ । नेपालमा आँपको उत्पादन बढाउन अनुसन्धान शुरु गरिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर क्याम्पस चितवनले आँपको उत्पादनमा बढाउन अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
अनुसन्धानपश्चात् नेपालमा मौसमी र बेमौसमी आँपको उत्पादन बढाउन ठोस योजना तयार गरिने राष्ट्रिय आँप सिकाइ केन्द्रका संयोजक अर्जुनकुमार श्रेष्ठले बताए । विश्वविद्यालयले पहिलोपटक आँपलाई नै मुख्य केन्द्र बनाएर राष्ट्रिय आँप सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
केन्द्रमार्फत विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र प्राध्यापकले विशुद्ध आँपको मात्र अनुसन्धान गर्नेछन् । वर्षेनी आँपको उत्पादन ओरालो लाग्दै गएपछि विश्वविद्यालयले आँपको अनुसन्धानमा जोड दिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
रोगकिरा, परम्परागत खेती प्रणालीलगायत समस्याले आँप खेती व्यवसायीकरण हुन नसकेपछि विश्वविद्यालय अनुसन्धानमा जुटेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा पाइने फलफूलमध्ये सर्वाधिक रुचाइने फलफूलमा आँप पर्दछ । यसको माग पनि बढ्दो छ तर नेपालमा आँपको उत्पादन भने वर्षेनी घट्दो छ ।
उत्पादन क्षेत्र बढे पनि उत्पादकत्व घट्दै गएपछि यसको अनुसन्धान शुरु गरेको उनले बताए । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार आँपको उत्पादन क्षेत्र बढेर ३८ हजार ३५३ हेक्टर पुगेको छ तर, उत्पादकत्व भने घटेर प्रतिहेक्टर ७.०५ मेटि्रक टन मात्रै छ ।
उत्पादकत्व घट्दै गएपछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विदेशी अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य शुरु गरेको छ ।विश्वविद्यालयले आफ्नो जीवननै आँपको अनुसन्धानमा समर्पित गरेका थाइल्याण्डको क्यासेसर्ट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता बोलाएर प्राध्यापक, विद्यार्थी, किसानलाई प्रशिक्षण दिएको छ ।
थाइल्याण्डको क्यासेसर्ट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. राभी, डा जेट, डा. लोपले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । सोमबारदेखि शुरु प्रशिक्षण बिहीबारसम्म चल्नेछ ।
प्रशिक्षणमा रामपुर क्याम्पसका प्रध्यापक, विद्यार्थी, नार्कका वैज्ञानिक र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी सहभागी छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यस्ता कार्यशालाले नेपालमा आँपखेतीमा देखिएका समस्याको समाधान र नियन्त्रणबारे व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने आइफा परियोजनाका कन्ट्री डाइरेक्टर अमर थिङले बताए ।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको सो कार्यक्रमले आँप उत्पादनको क्षेत्रमा कायापलट गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।
सुक्ष्म अनुसन्धान र नयाँनयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिए नेपालमा आँप खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको थाइल्याण्डका आँप अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ ।
क्यासेसर्ट विश्वविद्यालय थाइल्याण्डका अनुसन्धानकर्ता डा. राभीले नेपालको मौसमअनुसार धेरै मात्रामा आँप उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
नेपालमा फलफूल उत्पादनको कूल क्षेत्रमध्ये ३१ प्रतिशत आँपले नै ओगटेको छ तर, यसको पूर्णरुपमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।
नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३/१४ मा करीब रु २२ करोडको १३ हजार ३५३ मेटि्रक टन आँप आयात गरिएको छ ।